चोर दिपक ! ‘शत्रुगते’ प्रोमो कस्तो छ ? « Ramailo छ
चोर दिपक ! ‘शत्रुगते’ प्रोमो कस्तो छ ?
मल्टीस्टारर फिल्म ‘शत्रुगते’ को प्रोमो रिलिज गरिएको छ । प्रदीप भट्टराई निर्देशित फिल्मको प्रोमो प्रमिसिङ छ । ट्रेलरमा फिल्मको सबै कलाकारहरु प्रस्तुत छन् । चैत ९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको प्रोमो हेर्नुस् :
सबै कलाकारको भूमिका स्ष्पट हुने ‘शत्रुगते’ को प्रोमो तयार गरिएको छ । हरिवंशको जोडीको दिपाश्री निरौला, दिपकराज गिरी चोर र प्रियंका कार्की पुलिसको भूमिकामा प्रस्तुत छन् । यस्तै पल शाह र आँचल शर्मालाई प्रेम जोडीको रुपमा देख्न सकिन्छ ।
प्रोमोमा कलाकारहरु बसुन्धरा भुसाल, राजाराम पौडेल, शिवहरि पैडेल, किरणा केसी लगायत कलाकारहरुलाई पनि देखाइएको छ । प्रोमो रिलिजसँगै ‘शत्रुगते’ थप प्रतिक्षित बन्न गएको छ । फिल्मको रुपै मोहनी बोलको गीत हिट भैरहेको छ ।